28th January, 2022 Fri ०९:०६:०३ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । नयाँ दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर डिफेन्स इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिसमा शुक्रबार दिएको बयानका कारण जर्मनीको नौसेना प्रमुख काई आचेन सोनबरले गत हप्ता राजीनामा दिनुपरेको थियो।
तर, जर्मन नौसेना प्रमुखले भनेका थिए, ‘रुस एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो । चीनकोविरुद्धमा जर्मनीसँगै भारत पनि आवश्यक छ।’ जर्मन नौसेना प्रमुखको भनाइलाई अहिले युक्रेन संकट, भारतको सन्दर्भमा रुसको महत्वको ऐनामा हेरिएको छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जुनसुकै बेला युक्रेनमा आक्रमणको आदेश दिन सक्ने बताइएको छ । पुटिनलाई अमेरिका, बेलायत र ईयू देशहरूबाट लगातार चेतावनीहरू प्राप्त भइरहेका छन्। तर, पुटिनले मानेनन् र आक्रमणको आदेश दिए भने यसले युरोपलाई मात्र नभई भारतलाई पनि असर गर्छ ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई आफ्ना कूटनीतिज्ञका परिवार फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । बेलायतले पुटिनले यस्तो गरेमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ । ईयू देशहरूले पनि यस्तो चेतावनी दिइरहेका छन्।
यी सबैको बीचमा चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न पश्चिमलाई रुसको आवश्यकता पर्छ भन्ने जर्मन नौसेना प्रमुखको भनाइ यो महत्त्वपूर्ण छ। युक्रेनमा आक्रमण भएमा रुसलाई एक्लो पार्न पश्चिमी देशहरूले धेरै ठूलो प्रतिबन्ध लगाउने विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पनि यसबारे संकेत गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा रुसलाई चीनको आवश्यकता पर्नेछ । पश्चिमा प्रतिबन्धको प्रभावलाई कम गर्न चीनले छिमेकी रुसलाई सहयोग गर्न सक्ने विज्ञहरुको विश्वास छ । चीनले आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनेको छ। तर, उनले युक्रेन नाटोको सदस्य बन्न नहुने कुरामा पनि समर्थन गरिरहेका छन् ।
रुसमाथि पश्चिमा मुलुकले नाकाबन्दी लगाएमा चीनले मात्रै त्यसको क्षतिपूर्ति दिन सक्ने र यस्तो अवस्थामा चीन–रुस नजिकिने विश्वास गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा रुसको भारतसँगको मित्रतामा असर पर्ने सम्भावना छ ।
स्वीडिश थिंक ट्याङ्क स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युट (SIPRI) को रिपोर्ट अनुसार भारतको सैन्य आपूर्तिको ६० प्रतिशत रुसबाट आउँछ । यो निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। युक्रेनको मामिलामा पूर्वी लद्दाखमा चीन र भारतका सैनिक आमनेसामने हुँदा भारतले रुसलाई रिसाउने जोखिम उठाउन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ युरोप र अमेरिका पनि भारतका महत्वपूर्ण साझेदार हुन् । भारत–चीन सीमा निगरानीमा भारतीय सेनाले अमेरिकी गस्ती विमानको सहयोग लिइरहेको छ । भारतले अमेरिका र युरोपबाट सैनिकका लागि शीतकालीन लुगा किन्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले न रुसलाई छोड्न सक्छ न पश्चिमलाई । युक्रेन–रुस संकट भारतका लागि पनि संकटभन्दा कम छैन ।
युक्रेन संकटको बीचमा चीनले रुसलाई भारतको सैन्य आपूर्ति रोक्न दबाब दियो भने रुसले के गर्ला ?
‘मलाई लाग्दैन रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्छ’ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सेन्टर फर रुसी र सेन्ट्रल एसिया स्टडीजका सहयोगी प्राध्यापक राजन कुमार भने ।
‘पुटिनलाई आक्रमण गर्न त्यति सजिलो छैन। रूसको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म युरोपमा ग्यास आपूर्तिमा निर्भर छ। यदि उसले आक्रमण गर्‍यो भने रुसको चीनसँगको निकटता बढ्छ र यो भारतका लागि राम्रो हुनेछैन । रुसले सैन्य आपूर्ति रोक्दैन । तर, इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीमा असर पर्नेछ ।
राजन कुमार भन्छन्, ‘जब पुटिनले २०१४ मा क्रिमियालाई रूसमा गाभ्यो, भारतको प्रतिक्रिया थियो- रूसको युक्रेन र क्राइमियामा तार्किक चासो छ। भारतले ‘एनेक्सेशन’ शब्द पनि प्रयोग गरेको छैन। यसपटक पनि भारतको अडान दुई शक्तिबीचको टकरावको बीचमा नआउने हो । तर कहिलेकाहीँ नआए पनि प्रभावित हुन्छ। सन् १९६२ मा क्युवाली मिसाइल संकट र भारतमा चीनको आक्रमण दुवै एकैसाथ भएका थिए । सोभियत संघलाई चीनको समर्थन चाहियो। यस्तो अवस्थामा रुसले कठिन समयमा भारतलाई साथ दिएन ।’
रुसलाई फेरि एकपटक चीनको आवश्यकता पर्ने देखिएकाे छ। यस्तो अवस्थामा रुसले आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर भारतसँगको सम्बन्धको वास्ता नगर्ने सक्ने बताउन थािलएकाे छ। बताइएको छ ।
राजन कुमार भन्छन्, ‘यो भारतका लागि कठिन समय हो । जसरी अमेरिकाले रुस र चीनलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यसरी नै भारतले कुनै पनि परिस्थितिमा रुस र अमेरिका दुवैलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।’
‘जमनका नौसेना प्रमुखको राजीनामा के कारणले गर्दा रुससँग पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने भावना युरोपमा छ । तर, अमेरिका युरोपमा पुटिनको डर राख्न चाहन्छ ताकि नाटोको भूमिका सान्दर्भिक रहोस्’ राजन कुमार भन्छन् ।
भारतकाे रुसतर्फ झुकाव
खाडी युद्धपछि विश्वभर अमेरिकाको सैन्य हस्तक्षेप बढ्यो । यसमा सन् १९९० को दशकमा बोस्निया र कोसोभोमा भएका सैन्य हस्तक्षेपहरू समावेश छन्। सन् १९९९ मा नाटोले सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा बमबारी गरेको थियो । यसै आधारमा रुसले नाटो गठबन्धन आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्र नभएको भन्दै आएको छ । नाटोले बेलग्रेडमा बम प्रहार गर्दा चिनियाँ दूतावासलाई पनि असर परेको थियो र चीनले यसलाई बिर्सने छैन।
९/११ आतंकवादी हमला पछि, नाटोले धारा ५ प्रयोग गरेर अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो। तर, अमेरिकाले गत वर्ष अफगानिस्तानबाट आफ्नो झोला फिर्ता लिएको थियो । त्यसलाई समर्थन गरेको सरकारका राष्ट्रपति असरफ घानी पनि देश छोडेर भागेका थिए।
अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता भएपछि अमेरिकी आदेशयुक्त विश्व कमजोर हुँदै गएको सन्देश गएको विज्ञहरू बताउँछन् । अब पुटिनले कजाकिस्तानमा सफलतापूर्वक सैन्य हस्तक्षेप गरेको छ । अब युक्रेनमा डर गहिरो छ।
नोभेम्बर २०२० मा युक्रेनले क्रिमियामा कथित मानवअधिकार उल्लङ्घनको बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्ताव ल्याएको थियो र भारतले यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्‍यो। यो प्रस्तावलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो । यहाँ पनि भारतले अमेरिकाको सट्टा रुसको पक्ष रोजेको स्पष्ट छ ।
सन् २०१४ को मार्चमा रुसले क्रिमियालाई गाभेको बेला भारतको तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका शिव शंकर मेननले भनेका थिए, ‘क्रिमियामा रुसको पूर्णतया वैध चासो छ।’ उनले पनि विलयको समर्थन गरेका थिए। अमेरिका लगायत युरोपका देशहरुले अझै पनि यसलाई गैरकानुनी ठान्छन् ।
त्यसपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भारतको समर्थनका लागि धन्यवाद दिँदै भने, ‘क्रिमियामा रुसी कारवाहीलाई समर्थन गर्ने सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। क्रिमियामा रुसको कदमलाई नेतृत्वले समर्थन गरेको चीनप्रति म आभारी छु। हामी भारतको संयम र निष्पक्षताको धेरै प्रशंसा गर्छौं।’
भारतलाई कस्तो असर पर्ला ?
यदि रुस र युक्रेनबीच सैन्य मुठभेड भयो भने पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा रुसले युरोपमा ग्यास आपूर्ति कटौती गर्न सक्छ । यसले तेलको वास्तविक मूल्यमा असर गर्नेछ। युक्रेनको डोनबास क्षेत्र, जुन रुस र युक्रेन बीचको विवादमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यहाँको सबैभन्दा ठूलो आरक्षित छ। यस्तो अवस्थामा रुसले चीनसँग तेल र ग्यास बेच्ने कुरा गर्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार प्रभावित हुनेछ र तेलको मूल्य बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा यसको असर भारतमा पनि पर्नेछ ।
फेब्रुअरी ४ बाट बेइजिङमा शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदैछ । यसको उद्घाटन समारोहमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन पनि सहभागी हुने भएका छन् । यस भ्रमणका क्रममा पुटिनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्नेछन् । डिसेम्बरमा, पुटिन र सी जिनपिङले फोनमा कुरा गरे। र, चिनियाँ नेताले युक्रेन नाटोमा सामेल हुन नदिने पुटिनको मागलाई समर्थन गरे।
अहिले पाकिस्तानले पनि रुससँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीको अन्त्य भएदेखि नै पाकिस्तान रुससँग द्विपक्षीय साझेदारी बढाउनमा लागिरहेको छ । युक्रेन संकटका कारण भारत र रुसबीचको सम्बन्ध प्रभावित भएमा यो अवसर पाकिस्तानका लागि पनि मानिएको छ । हालै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरी पाकिस्तान भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । पुटिन पाकिस्तान गए भने यो उनको पहिलो भ्रमण हुनेछ ।
चीन विरोधीलाई बलियो बनाउँदै भारत मिसाइल बिक्रीको फाइदामा
तिब्बतको बहानामा अमेरिकाले चीनलाई दबाब दिइरहेको छ ?
भारतले पाकिस्तानी सेनामाथि विजय प्राप्त गरेपछि भएकाे थियाे बंगलादेशको जन्म
युक्रेनमा आक्रमणपछि झण्डै एक तिहाइ रोजगारी गुम्यो : संयुक्त राष्ट्र
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले दिए ‘जातिय हिंसा’ भड्किन सक्ने चेतावनी